वैशाख २ गते २०७६
पूर्वप्रेमीसँग भुलेर पनि यस्तो नगरौं
ब्रेकअप केही मानिसका लागि सजिलो हुन्छ भने केहीको लागि यसले जीवनमा ठूलो धक्का दिन्छ । यस्तोमा धेरै मानिसहरु पूर्वप्रेमी-प्रेमिकासँग कुरा गर्दैनन् । तर, केही मानिसले भने साथीको रुपमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ : १. आफ्नो दुःख नबताउनुआफ्नो एक्ससँग कुरा गर्दा आफ्नो दुःख वा समस्याको विषयमा कुरा गर्नु हुँदैन । यदि उसले आफ्नो समस्यलाई नबुझेको खण्डमा फेरि पनि दुःख लाग्नसक्छ । यसले मानिसको दुःख… पुरा पढौ
दयारानीमा गुरुङ युवक बनी यसरी नाचे दयाहाङ
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा चकलेटी र सर्लक्क परेका नायकहरुको बाहुल्यता तोडेका नायक दयाहाङ राईको नयाँ फिल्म दयारानीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । “चिरी च्याट्ट” बोलको सार्वजनिक गीतमा राजनराज सिवाकोटी र मेलिना राईको आवाज रहेको छ भने शब्द र संगित पनि राजनराज कै रहेको छ । बिक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफीमा दयाहाङ र दीया पुन फिचर्ड रहेका छन् । दयाहाङ नाच्न भनेपछि तीनहात पछि सर्छन् तर पछिल्लो समय उनी नाच्न पनि थालेका छन्… पुरा पढौ
बाँदरले राजालाई सिकाएको पाठ के होला ?
एक समयमा राजा आफ्नो सैनिकहरुसँग जंगलमा शिकार गर्न गएका थिए । रात भएपछि राजाले जंगलमै शिविर लगाए । रातमा जब राजा सुतिरहेका थिए , तब एक बाँदर उनको शिविरमा पसेर कराउन थाल्यो । बाँदरको आवाज सुनेर राजा तुरन्त उठे । उनले देखे एक सर्प उनको नजिकै छ जसले उनलाई डस्ने वाला छ । राजाले तुरन्तै सर्पलाई खेदाए । यससँगै राजाले बाँदरलाई आफ्नो ज्यान बचाएकोमा धन्यवाद दिए । राजाले बाँदरलाई फलफुल… पुरा पढौ
परापूर्वकालमा यसरी हुन्थ्यो सेक्स
वर्तमान समयको हामी जस्तोे सबैलाई ‘सेक्स ट्रेन्ड्स’ अर्थात् यौन प्रथाबारे थाहा नै होला । तर धेरैलाई यो थाहा नहोला कि सेक्सको अनौठो प्रथा शताब्दीऔँ पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । शताब्दी पहिले सेक्सबारे ७ अनौठो प्रथाहरु थियो । संक्षिप्तमा हेर्नुहोस के थिए ति ७ अनौठो प्रथाहरु – १. लिपिस्टक र ओरल सेक्स प्राचीन इजिप्टमा लिपिस्टिक लगाउनुको अर्थ तपाई ओरल सेक्सका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । बिशेषगरी, इजिप्टका दरबारी यौनकर्मी आफ्नो… पुरा पढौ
दुबईमा ‘धुर्मुस सुन्तली साँझ’ हुने
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्ने ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माण सहयोगार्थ दुबईमा धुर्मुस सुन्तली साँझ आयोजना हुने भएको छ । दुबई स्थित सम्पुर्ण संघसंस्थाहरुको आयोजनामा चितवन समाजको संयोजनमा यहि अप्रिल २६ तारिखका दिन कार्यक्रम हुने धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल(धुर्मुस) ले जानकारी दिएका छन् । ग्राण्ड एक्सेलसियर होटल, बर दुबईमा आउँदो अप्रिल २६ मा हुने कार्यक्रममा धुर्मुस सुन्तली सहित अन्य चर्चित कलाकारहरुको समेत उपस्थिती रहने छ । धुर्मुसले… पुरा पढौ
पुरुषोत्तमको ‘यै जवानी बैना राखेर’ (गीतको भिडियोसहित)
नयाँ वर्षको २०७६ को अवसरमा लोकदोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले नयाँ गीत ‘यै जवानी बैना राखेर’ सार्वजनिक गरेका छन् । गीतमा न्यौपाने र देवी घर्तीको आवाज सुन्न सकिन्छ । गीतमा लय तथा शब्द संकलन शिव हमाल ‘लालुमै’ गरेका हुन् । गीतको भिडियोसमेत उत्कृष्ट बनेको न्यौपानेले बताए । भिडियोमा विनोद श्रेष्ठ र अञ्जली अधिकारीको नृत्य हेर्न सकिन्छ । भिडियोको निर्देशन प्रकाश भट्टले तथा छायाकंन राजेश घिमिरेले गरेका हुन् । भरपुर संगीतको प्रस्तुतिमा… पुरा पढौ
प्रियंका र आयुसमानले गरे साइवर अपराध
समुदाय - प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको निमार्ण र शुभ मिडिया होमको सहकार्य रहेको लघु चलचित्र ‘बैगुनी माया’ गज्जब टिभी यूटुब च्यानल मार्फत अपलोड गरिएको छ । प्रियांका कार्की, आयुसमान देशराज जोशी, शिवहरी पौडेल, कमला रेग्मी, अशोक धिताल, विष्णु बुढाथोकी, पुनम भण्डारी लगायतले अभिनिय रहेको चलचित्रमा गोकुल अधिकारीको छायांकन, सरोज ओली र प्रेम पुनको कथा लेखन, रविन भट्ट र अमन मानन्धरको सम्पादन तथा राजेश विकको निर्देशन रहेको छ भने… पुरा पढौ
प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘आरुसी’ को दोस्रो गीत रिलिज
त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘आरुसी’ को दोस्रो गीत रिलिज भएको छ । मंगलबार ओएसआर युट्युव च्यानल मार्फत फिल्मको लोकलयमा आधारित ‘डालीमा हो डालीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गीतमा सुसन साम्सोहाङ लिम्बु र सुम्निमा इङ्नामको स्वर रहेको छ । लय संग्रोलाको शब्द रचनामा विकास चौधरी संगीतबद्ध गीतमा पुराना एवं पाका कोरियोग्राफर कमल राईको नृत्य निर्देशन रहेको छ । टिपीकल शब्द भएका कारण यो गीत जनजिब्रोमा झुण्डिने गायक सुसनको… पुरा पढौ
रंगमञ्चमा देश देखाउँदै सरुभक्त
आगामी वैशाख ६ गतेबाट पोखरामा नाटक ‘बाकस’ मञ्चन हुने भएको छ । पोखरा थिएटरको छैटौ प्रस्तुति को रुपमा बाकस २१ गतेसम्म गन्र्धव नाटकघरमा देखाइनेछ । बाकसमा राष्ट्रिय परिवर्तनपछिको देशको अवस्था चित्रण गरिएको छ । साहित्यकार सरुभक्तले यो नाटक लेखेका हुन् । उनले लेखनसँगसँगै अढाइ दशकपछि निर्देशनमा फर्किदै छन् । लामो समयको अन्तरालमा नाटक निर्देशनमा फर्किएकोमा सरुभक्त उत्साहिहत छन् । ‘मेरो रंगमञ्चप्रतिको प्रेम जारी छ । नाटकको तृष्णा मेटिएको छैन’, उनले… पुरा पढौ
नयाँ वर्षबाट नयाँ फिल्म बनाउँदै दीपक
दिपकराज गिरीको नयाँ चलिचित्र ‘छ माया छपक्कै’ वैशाखबाट छयांकन हुने भएको छ । गिरी र रोहित अधिकारीको संयुक्त टिमले निर्माण गर्ने ‘छ माया छपक्कै’को निर्माणको तयारी सुरू भएको हो । ‘वडा नम्बर ६’ देखि चलचित्र निर्माणमा सक्रिय आमा सरस्वती मुभिजले यसपटक पनि लक्की मानिएको ‘छ’ अक्षरलाई नै निरन्तरता दिएको हो । आगामी दशैँमा प्रदर्शन गर्ने भनिएको चलचित्रको निर्देशन दिपेन्द्र लामाले गर्नेछन भने दिपकराज गिरी र केदार घिमिरले अभिनिय गर्नेछन ।… पुरा पढौ